Let's talk about IT: Linux တစ်ရပ်စာ မျှော်စဉ်ထက်က မြင်ကွင်း (2)
Linux distribution ခေတ်ဦးလောက် 1993 - 1994 ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Slackware နဲ့ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်နီးပါး ထွက်လာတယ့် distro ကတော့ Debian ပါ။ Operation System တွေထဲက အအောင်မြင်ဆုံး Community driven server OS လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ Enterprise level linux server တွေမှာ Redhat ပြီးရင် လူသုံးအများဆုံးလောက်ရှိပါတယ်။ Stability အားကောင်းတယ့် Linux distro တစ်ခုပါ။ Ubuntu ရဲ့အဖေမို့ Ubuntu ကျွမ်းကျင်ရင် Debian လေ့လာရတာ မခက်ပါဘူး။ Community အလွန်အားကောင်းပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း Debian ဟာအလွန် up to date ဖြစ်ပါတယ်။ Re Debian package (.deb) တွေ ကို Commnity တစ်ခုလုံးက Engineer ထောင်နဲ့ချီ maintain လုပ်နေတာမို့ Commercial Linux တွေထက် update release ပိုမြန်ပါတယ်။ Library တစ်ခု ၊ package တစ်ခု version အသစ်ထွက်ရင် Debian repo တွေမှာလည်း update version ရှိနေပါပြီ။ Debian မှာ package manager အနေနဲ့ apt ကို အဓိကသုံးပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က Deb linux fans မဟုတ်ပေမယ့် package management မှာ apt က redhat ရဲ့ yum ထက်ပိုသာတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ Server OS မို့ laptop မှာသွင်းရင် driver လေးတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာသွင်းရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ webcam လိုဟာမျိုးပေါ့။
အဖေထက်သား တစ်လကြီးတယ့် Deb-based Linux ကတော့ ဇာတ်လိုက်ကျော် Ubuntu ပါ။ Community driven ပါပဲ။ Server OS နေရာမှာ Debian ကိုမကျော်နိုင်ပေမယ့် Desktop version ကတော့ Linux တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် ဟုန်းဟုန်းတောက်အောင်မြင်ပါတယ်။ Ubuntu က desktop တွေ laptop တွေအတွက် အဓိကထားထားတာမို့ hardware တော်တော်များများကို driver သိပါတယ်။ Release cycle က ခြောက်လတစ်ခါ release လုပ်တော့ အမြဲတန်း kernel အသစ် library အသစ် hardware driver အသစ်တွေနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ Install လုပ်လိုက်ရင် hardare အားလုံးနီးပါးက သုံးရန်အသင့်၊ လိုအပ်မယ့် package လေးတွေကလည်း default ပါပြီးသား၊ ထပ် install လုပ်ချင်ရင်လည်း GUI ကနေ click click နဲ့တင်ရတယ်။ Mouse လေးသုံးရမှ ကျေနပ်သူတွေအတွက် တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ Windows လောက် idiot proven usability မဟုတ်ပေမယ့် 90% လောက် ok မှာပါ။ Debian ရဲ့သားမို့ debian community ကိုအမွေဆက်ခံထားပါတယ်။ Windows မဝယ်ချင်လို့၊ Virus စိတ်ညစ်လို့ Linux ဖက်ပြောင်းလာသူတွေက Ubuntu ကိုရွေးလေ့ရှိတာမို့ beginner ဆန်ဆန်မေးခွန်းတွေ တော်တော်များများက ubuntuforum.org မှာရှိနေပြီးသားပါ။ မသိရင် မေးစရာတောင်မလိုဘူး။ သွားရှာ ၊ ရှိတယ်။
ဒါဆို တော်တော်အစဉ်ပြေတယ့် Linux ပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း ကြားဖြတ်ပြောတယ့် ကျနော့ရဲ့personal အမြင်၊ အကြံပေးတာပါ။ သိပ် user friendly ဖြစ်လွန်းတော့ Windows အစားထိုးစစ်စစ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ Windows သုံးတုန်းကလည်း Operation system လို့ပြောရင် မျက်လုံးအဝိုင်းသား၊ Ubuntu သုံးတော့လည်း ထိုနည်းလကောင်း။ User အတွက် အစဉ်ပြေပါတယ်။ Engineer ဖြစ်ချင်ရင်တော့ လေ့လာရုံလောက်ပဲ GUI ကိုအားကိုးသင့်ပါတယ်။ Linux ကိုတကယ် သိချင် တက်ချင်ရင်တော့ GUI ကို သိပ်မမှီခိုစေချင်ပါဘူး။ မဟုတ်ရင် Ubuntu user ပဲဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ Linux user ဖြစ်မလာတော့ပါဘူး။
Ubuntu က Gnome desktop နဲ့လာလေ့ရှိပြီး၊ Kubuntu ရယ်လို့ KDE နဲ့ လာတာလည်းရှိပါတယ်။ Ubuntu ကိုမှ အခြေခံတယ့် Educational version Edubuntu တို့ဘာတို့လည်းရှိသေးတယ်။ နောက်ထက် Ubuntu ကိုအခြေခံထားတယ့် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ့် Linux ကတော့ Linux Mint ပါ။ သူလည်း home user တွေအတွက် ရည်ရွယ်တာမို့ OpenOffice တို့ Multimedia player တော်တော်များများတို့ အဆင်သင့်ပါလာပါတယ်။ သူလည်းလှလှပပနဲ့ သုံးရတာ အတော်လွယ်တယ့် Linux ပါပဲ။
Ubuntu လိုပဲ Debian အခြေခံတယ့် နောက်နာမည်ကြီး Linux တစ်ခုက Knoppix ပါ။ 2003 မှာ စတင်ခဲ့ပြီး Linux LiveCD distro ထဲမှာ သူစအောင်မြင်တာလို့ ပြောရမလားမသိဘူး။ သူ့ထက်စောတယ့် DemoLinux တို့ဘာတို့ရှိပေမယ့် ကျနော်တို့က 2004 လောက်မှ မျက်စိစပွင့်တာမို့ Knoppix နဲ့ပဲ စသိခဲ့တာပါ။ Install လုပ်စရာမလိုပဲ CD ပေါ်ကနေတင် boot တက်လို့ရတယ်။ အများအားဖြင့် rescue disc အနေနဲ့ အသုံးများပါတယ်။ အဲ အခုတော့ Ubuntu အပါအဝင် Linux တိုင်းနီးပါးက LiveCD option ပေးလာပါတယ်။ Download ပါ၊ စမ်းကြည့်ပါ၊ ကြိုက်မှ install ပါပေါ့။
ဒါကတော့ Deb based ထဲက ရောက်တက်ရာရာပဲ။ Rpm based ထဲက Redhat တို့ Fedora တို့၊ Slackware ကို အခြေခံတယ့် Novell ရဲ့ SuSE linux တို့ ၊ Linux from scratch တို့၊ Hacker လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခေါ်တယ့်သူတွေကြိုက်တယ့် Security auditing linux တွေ၊ SmoothWall တို့လို firewall linux တွေ ... တော်တော်များတာပဲ။ ရေးဖြစ်မယ် ဆိုရင်ပြောပါတယ်။ :D
Posted by Divinity at 2:44 AM
I like this post ...So analytical ...
For me, I like to click ...:) coz I like the good mouse to click ...:)
In deed, I like Ubuntu to play the effects. And it is fun ....Frankly, I prefer to use Linux instead of using pirated OS .. Since I am interested in Java, I wish I could see freeware in every place.
Proprietary software should be wiped out :)
I am looking forwards to seeing this day ..
Hope next posts will be coming out soon ....:)
Btw, I hate the so-called hackers who talked as real hackers .... :)